Dood Cilmiyeed loogu hadlayay iska dhexgalka bulshada oo lagu qabtay Koonfur Afrika “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Dood Cilmiyeed loogu hadlayay iska dhexgalka bulshada oo lagu qabtay Koonfur Afrika “SAWIRRO”
Doodani oo lagu qabtay magaalada Pretoria ayna iska kaashadeen Safaaradaha Soomaaliya iyo Sweden ee Dalka Koonfur Afrika, loogana hadlayay iska dhexgalka bulshada gaar ahaan Soomaalida Koonfur Afrika iyo dadka South Africanka iyo waliba sida ay Soomaalida ganacsiga ku leh dalkan u soo kordhiyeen Horumar iyo in laga bartaa khibradda ay u leeyiihiin ganacsiga, ayaa ka qeybalay labada Safiir ee Soomaaliya iyo Sweden, qaar ka mid ha madaxda labada Safaaradood, xubno ka socda Wasaaradda Arimaha Dibadda Koonfur Afrika, qaar mid ah ganacsatada Soomaalida, Xubno matalayay Ururada bulshada, Khuburo ka socotay Dalka Sweden iyo marti sharaf kale.
Safiirka Dowladda Sweden u fadhiya K/Afrika Danjire Anders Hagelberg oo furay shirka ayaa ugu horeyntii u mahadceliyay Safaaradda Soomaaliya oo qeyb weyn ka qaadatay qabashada doodani, waxa uuna sheegay in shirkani muhiim yahay, Soomaalida ay yihiin dad maskax furan oo mudan in laga bartaa habka ay ganacsiga u sameeyaan, isagoo carrabka ku dhuftay in Soomaalida Sweden ku dhaqan ay yihiin bulsho ka dhexmuuqata shucuubta kale inkastoo aan ganacsi la mid ah kan K/Afrika sameynin.
“Marka ugu horeysa waxa loo baahanyahay in la fahmaa waa in is dhexgalka bulshada la bartaa waxaan sidoo kale hadlayaa dhinaca dhaqaalaha,maanta waxaan rabnaa inaan fahano sida wax loogu baran lahaa Soomaalida ku dhaqan Koonfur Afrika dhinaca ganacsiga ugu baran lahaayeen Soomaalida degan Sweden”ayuu yiri Safiirka Dowladda Sweden u fadhiya Koonfur Afrika.
Cabdifitaax Sheekh Maxamed Xikam oo ka mid ah Aqoonyahanada Soomaalida Koonfur Afrika oo qeyb ka ahaa martidii kasoo qeybgashay kana hadlay baartiaan uu horey ugu sameeyay ganacsiga iyo ganacstada Soomaalida ayaa si weyn ugu hadlay sida ay Soomaalida u abuuraan ganacsiga iyo horumarka ay kusoo kordhiyeen dalkani.
Eng Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Yariisow ) oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu casuumay madasha ayaa si weyn ugu hadlay Soomaalida Qurbaha iyo horumarka ay ka sameeyeen dalalka magangalayada siiyay.
“Soomaalida waa dad u maskax furan leh hal abuurka ganacsi, iyagoo mararka qaar la kulma caqbado,waa dad ku wanaagsan xaga iskaashiga sidoo kale waxa ay abuuraan fursado iyo ganacsiyo yar yar meelaha tuulooyinka ee South Africa”ayuu yiri Eng Yariisow.
Qaar ka mid ah ganacstada Soomaalida ee soo galay K/Afrika sanado badan ka hor ayaa iyagane dhankooda sheegay in Soomaalida ay kasoo bilaabaan ganacsigooda meel hoose ugu dambeyntiina ay noqdaan dad wax la qeybsada bulshada inteeda kale.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Koonfur Afrika Danjire Jamal Maxamed Barrow oo isna halkaasi qudbad ka jeediyay waxa uu u mahadceliyay Safaaradda Sweden iyo kasoo qeybgalaayasha,waxa uuna sheegay in Soomaalida dalkaan kusoo kordhiyeen horumar wanaagsan oo la taaban karo.
“Waxaan dhiiragalinaynaa dadkeena ganacsatada ah inay dhexgalaan dadka deegaanka u dhashay,ha noqoto kuwa leh ganacsiga yar yar ama kuwa waaweyn ayna la wadaagaan khibradooda,waxaan Dowladda Koonfur Afrika iyo Shacabkooda u sheegaynaa in ganacsatada Soomaalida ay si dadban u wax ugu soo kordhiyaan iyagoo abuuraya fursado bixiyanaya canshuuraha.ayuu yiri Danjire Jamal Barrow.
Doodan oo socotay hal maalin ayaa kusoo idlaaday jawi wanaagsan iyagoo dadkii kasoo qeybgalay madashad Shirka ay wadaageen fikirado kala duwan oo wax ku ool ah.
C/qaadir Axad,Warbaahinta Qaranka Pertoria.
Wasaaradda haweenka oo qabatay kulan looga tashanayay sharciga ka hortaga xadgudubyada kufsiga “SAWIRR”
Madaxweynaha oo furay shir ku saabsan xoojinta waxqabadka hay’adaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee Soomaaliya “SAWIRRO”
Madaxweynaha oo furay shir ku saabsan xoojinta waxqabadka hay’adaha iyo hufnaanta maaliyadeed ee Soomaaliya "SAWIRRO"